Sahirana teo i Maorisy raha lasa dragon de l’Océan Indien i Madagasikara ka dia noesoriny ny saron-tavany hoy i Zafilahy !
Magro 08 Avril 11
Na dia nigaina dia nigaina aza ny hainandro tetsy amin’ny kianjan’ny finoana dia tsy nahasakana ny vahoaka ho tonga hitolona toy ny mahazatra.
Sambory aho raha mandainga hoy Rakotovazaha Olivier !
Auteur Solo RazafyPublié le 8 avril 2011 8 avril 2011 Catégories Magro, Malagasy, Politique
2 réflexions sur « Sahirana teo i Maorisy raha lasa dragon de l’Océan Indien i Madagasikara ka dia noesoriny ny saron-tavany hoy i Zafilahy ! »
9 avril 2011 à 8 h 37 min
Vavaky ny vahoaka hoy itony Mauricien ny hisian’ny fifidianana!: Mba tany demokratika, nefa tsy mijery afatsy ny HAT sy ny tombotsoan’olom-bitsy.
9 avril 2011 à 8 h 53 min
I Maorisy dia matahotra ny fandrosoan’ny Malagasy. Fizahahan-tany no ivelomany nefa raha tafavoaka soa aman-tsara isika dia tena mpifaninana avo lenta aminy. Mety amin-drizareo ny instabilite politique lava misy eto amintsika satria miteraka fiemorana lalandava eo amin’ny lafiny ara-ekonomika izany, izay lasa manome vahana azy eo amin’ny tontolon’ny fampandrosoana ny firenena. Koa tsy mahagaga ny fihetsiny. Hatrany amin’ny Mars 2009 dia efa nanohana ny FAT ny mpanohatra ankehitriny any an-toerana dia ny antoko sosilista MMM izany. Kely sisa dia rizareo indray no hitantana any, koa tsy dia mahagaga loatra izao fihetsiny izao. Ankoatr’izay, dia manana fialonana ara-politika amin’ny Afrique du Sud koa rizareo ao amin’ny vondrona SADC. Tsy tiany loatra ny fihetsiky AFS satria toa mizaozao eo imasony. Rizareo koa no firenena fampiasan’ny Frantsay amin’ny fampiarana ny politikany aty amin’ny faritra afique australe sy ocean indien.
Précédent Article précédent : Atsangan’ny FAT ho fahavalon’ny vahoaka ny Tafika Malagasy !
Suivant Article suivant : « Médiation parallèle » ny ataon’ny COI hoy ny ankolafy telo ka tsy azo ekena !